Xan Ebook Store｜အမေးများ မေးခွန်း
»TOP > အမေးများ မေးခွန်း
Xan ဆိုက်နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများ
Q. Xan ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
A. Xan သည် Digital Right Management (DRM) ကန့်သတ်ချက်များပါရှိသော စာအုပ်များကို ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးထားသော ဒီဂျစ်တယ်လ် စာအုပ်ဆိုက် ဖြစ်ပါသည်။
Q. Xan မှ ဝယ်ယူနိုင်သောစာအုပ်များသည် မည်သို့သောစာအုပ်များ ဖြစ်ပါသနည်း။
A. Xan မှ EPUB နှင့် PDF ဖိုင်ပုံစံ ရှိသောe-book များကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် e-book သာမက၊ ဒီဂျစ်တယ်လ်ဖြင့်ပြောင်းလဲထားသော ရုပ်ပုံနှင့်အသံများ (ဥပမာ စာအုပ်၊ စာပေ၊ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို) များကိုပါ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။
Q. Xan တွင်စာအုပ်များဝယ်ယူဖတ်ရှုရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသနည်း။
A. Xan ၏ ၀န်ဆောင်မှု (စာအုပ်များကို ၀ယ်ယူခြင်းနှင့် download ဆွဲယူခြင်း) ကို အသုံးပြုရာတွင်၊ Xan နှင့် i-Press ၀န်ဆောင်မှု၏ အသင်း၀င် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Xan ဆိုက် ( Header) အပေါ်ဘက် ညာဘက်အခြမ်းတွင်ရှိသော မှတ်ပုံတင်ရန် ကိုနှိပ်ပါက အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစာမျက်နှာ သို့ရောက်ရှိပါမည်။ ထိုစာမျက်နှာရှိ [အသုံးပြုရာတွင်စည်းကမ်းချက်များ] တွင်အသေးစိတ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Q. Xan တွင် စာအုပ်ကိုဝယ်ယူခြင်းမရှိသော်လည်း (အခမဲ့)ဖတ်ရှု နိုင်ပါသလား။
A.အသင်း၀င် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို မပြုလုပ်ထားသော်လည်း စာအုပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း(စာမြီးဖတ်ခြင်း)ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ စာအုပ်များကို ၀ယ်ယူခြင်းနှင့် ဆွဲယူခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆိုက်၏ စွမ်းဆောင်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍
Q. ဖော်ပြချက် အဆင့် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
A. ဖော်ပြချက် အဆင့် ဆိုသည်မှာ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းများကို အခြေခံ၍ ခွဲခြားထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့်အတန်းနိမ့်သော စကားလုံးအသုံးအနှုန်း စာရေးဟန်များမပါရှိ ပြီးကန့်သတ်ပါမည်။
အဆင့်အတန်းနိမ့်သော စကားလုံးအသုံးအနှုန်း စာရေးဟန်များပါရှိသည်။
ကနဦး အခြေအနေတွင်「ဖော်ပြချက် အဆင့် ၁」 ဖြစ်လာသည်။
ထိပ်ဆုံးစာမျက်နှာ၏ ဘယ်ဘက်အခြမ်းတွင်ရှိသော Navigation ရှိ လဲလှယ်သည့် မီနူးအားဖြင့် setting ၏ ပြောင်းလဲခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Q. ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်စင် ရှိ စာအုပ်များကို ခွဲခြားခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
A. စာအုပ်များကို ခွဲခြားခြင်းဆိုသည်မှာ ဝယ်ယူထားသောစာအုပ် နှင့် ငှားရမ်းထားသောစာအုပ်များ ခွဲခြားဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Q. ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်စင်ရှိ စာအုပ်များကိုရှာဖွေခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
A. စာအုပ်များကို စာအုပ်အမည်အလိုက်၊ စာရေးဆရာအလိုက်၊ ထုတ်ဝေသူအလိုက် ရှာဖွေမှုကိုဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Q.အသင်း၀င်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို မည်သည့်နေရာမှ လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
A. Xan ဆိုက် ( Header) အပေါ်ဘက် ညာဘက်အခြမ်းတွင်ရှိသော ကိုနှိပ်ပါက အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း စာမျက်နှာ သို့ရောက်ရှိ၍ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။ [အသုံးပြုရာတွင်စည်းကမ်းချက်များ ] ကိုအတည်ပြု ရန်လိုအပ်ပါသည်။
Q. မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသော အသင်း၀င်အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲရာတွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရပါမည်နည်း။
A. အသင်း၀င် စာမျက်နှာ၏ [အသင်း၀င်အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲခြင်း] ကို နှိပ်ပေးပါ။ ယခုလက်ရှိတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသော အသင်း၀င်အချက်အလက်ကို ဖော်ပြထားသောကြောင့် ပြောင်းလဲချင်သော အကြောင်းအရာများကို ရိုက်သွင်းပါ။
ရိုက်သွင်းမှု ပြီးဆုံးပါက 「ပြောင်းလဲမှုကို အတည်ပြုမည်」 ကို နှိပ်၍ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
Q. စကားဝှက်ကို မေ့သွားသောအခါတွင်
A. ၁။ ဝင်ရန် ကိုနှိပ်လိုက်ပါက အသင်းဝင်စာမျက်နှာ သို့ ရောက်သွားပါမည်။
၂။ထိုစာမျက်နှာရှိ 「စကားဝှက်မေ့သွားခဲ့ပါက」 နှိပ်လျှင် စကားဝှက်သတိပေးမှု စာမျက်နှာ သို့ထပ်မံရောက်ရှိ၍ စကားဝှက်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။
၃။အသင်း၀င် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအချက်အလက်၏ မေးလ်လိပ်စာသည် လိုအပ်သောကြောင့် ရိုက်သွင်းပြီး၊ 「ပေးပို့မည်」ကို နှိပ်ပါ။
၄။ ရိုက်သွင်းထားသော မေးလ်လိပ်စာအတိုင်း မေးလ် ပြန်ပို့ပါမည်။
၅။မေးလ် တွင်ရောက်ရှိလာသော URL ကို နှိပ်ကာစကားဝှက်အသစ်ကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။
၆။စကားဝှက်အသစ် ရိုက်သွင်း၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမည် ကိုနှိပ်လိုက်သည်နှင့် စကားဝှက်အသစ်ကို ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
Q. အသင်း၀င်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ချင်သောအခါတွင်
A. ၁။ နှုတ်ထွက်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရာတွင် အသင်း၀င် စာမျက်နှာအတွင်းရှိ 「အသင်းဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း」ကို နှိပ်ပေးပါ။
၂။ Xan ၏ အသင်းဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း စာမျက်နှာကို ဖော်ပြထားသောကြောင့်၊ စကားဝှက်ကို ရိုက်သွင်း၍ 「နှုတ်ထွက်ခြင်း」 ကို နှိပ်လိုက်ပါက နှုတ်ထွက်ခြင်း ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါသည်။
Q. အသင်း၀င်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ထားသော်လည်းပဲ စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသလား။
A. အသင်း၀င်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် device ၌ downloadဆွဲယူထားသော စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း၊ ၀ယ်ယူထားသော စာအုပ်များကို ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်မှနောက်တစ်ကြိမ် ဆွဲယူခြင်းမှာ မပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် အထူးသတိပြုစေလိုပါသည်။
တဖန်၊ နှုတ်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာသောအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ Xan မှထောက်ပံ့ခြင်း မပြုတော့မည်ကို အထူးနားလည်ပေးစေလိုပါသည်။
Q. မည်သို့လုပ်ဆောင်ပါက စာအုပ်များ၀ယ်ယူနိုင်ပါမည်နည်း။
A. စာအုပ်များကို ၀ယ်ယူရာတွင် အသင်း၀င် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကို ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိလိုပါက [စာအုပ်များ၀ယ်ယူခြင်း] တွင်ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
Q. ဖတ်ရှုလိုသော စာအုပ်များကို ရှာဖွေလိုပါသလား။
A. စာအုပ်များကို စာရေးဆရာ၊ ထုတ်ဝေသူ၊ ကဏ္ဍအလိုက် ဖြင့်ရှာဖွေ၍သော်လည်းကောင်း၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာသားများဖြင့်သာမက ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Q. ငွေပေးချေခြင်း နည်းလမ်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
A. Xan မှစာအုပ်များကို ဝယ်ယူရာတွင် အကြွေး၀ယ်ကတ်နှင့် ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
အကြွေး၀ယ်ကတ် အနေဖြင့် VISA ／ MasterCard ／ JCB ／ American Express (AMEX)/Diners Club / MyanPay / YPay ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
PayPal ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ PayPal ဆိုက်သို့
ဝယ်ယူပြီးသော စာအုပ်များကိုပြန်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း
Q. ဝယ်ယူပြီးသော စာအုပ်များကိုပြန်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား
A. စာအုပ် ကိုပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်းကို လက်မခံနိုင်သည့်အတွက် အထူးနားလည်ပေးစေလိုပါသည်။
စာအုပ်အမည်နှင့် စာဖတ်ပရိသတ် ဝယ်ယူဖတ်ရှုလိုသော စာအုပ်ကိုသေချာစစ်ဆေးပြီးမှ ၀ယ်ယူပေးပါ။
ထို့ပြင်၊ စာအုပ်တွင် မူမမှန်အခြေအနေများရှိပါက နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည် ဆွဲယူပေးပါ။
အဆင်မပြေမှုများရှိခဲ့ပါက အသင်း၀င် အမှတ်စဉ်၊ စာအုပ်အမည်၊ မူမမှန် အခြေအနေတို့ကို [စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပုံစံ] သို့ အကြောင်းကြားပေးပါ။ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပုံစံ
Q. တူညီသော စာအုပ်များကို မှားယွင်း၍ ၀ယ်ယူမိပါက ပြန်အမ်းငွေကို ရရှိနိုင်ပါသလား။
A. Xan တွင်မှားယွင်း၍ ၀ယ်ယူခဲ့သော စာအုပ်များ၏ ပြန်အမ်းငွေကို ပြန်လည်ပေးချေခြင်း မရှိပါ။ စာအုပ်များကို ၀ယ်ယူရာတွင် သေချာစစ်ဆေးပြီးမ ၀ယ်ယူပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Q. နောက်တစ်ကြိမ် Download ဆွဲယူခြင်းတွင် ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။
A. စာအုပ်များဆွဲယူခြင်း အကြိမ်အရေအတွက်များကို ကန့်သတ်ထားပါသည်။ထုတ်ဝေသူဘက်မှ အခြေအနေအလိုက် ဖြန့်ဝေမှု ရပ်တန့်သွားသည့် စာအုပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်ကာလ နှင့် အကြိမ်အရေအတွက်အတွင်းတွင် နောက်တစ်ကြိမ် ဆွဲယူခြင်းကို မပြုလုပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
Q. ၀ယ်ယူထားသော စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုရန်အတွက် မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရပါမည်နည်း။
A. ၀ယ်ယူထားသော စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုရန်အတွက်ဖိုင်ပုံစံနှင့် သင့်လျော်သော Xan Viewer(အခမဲ့)ကို install လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ် သိလိုပါက [စာအုပ်များကို အဆင်ပြေစွာ ဖတ်ရှုရန်သို့] တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Q. စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုချိန်တွင် အင်တာနက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားရန် လိုအပ်ပါသလား။
A. အင်တာနက်အွန်လိုင်း အမြဲချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ တစ်ကြိမ် အွန်လိုင်းချိတ်ဆက်၍ စာအုပ်များကို ဆွဲယူပြီးသည့်နောက်တွင် offline ဖြစ်နေသော်လည်းပဲ စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ် သိလိုပါက [စာအုပ်များဆွဲယူခြင်း] တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Q. ၀ယ်ယူထားသော စာအုပ်များကို အခြားသော device ဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား။
A. ဖတ်ရှုချင်သော device တွင် Xan အား အသုံးပြုရန် ၀င်ရောက်ပြီး Window device , iOS device（iPhone/iPod touch、iPad）,Android device တို့ မှ Xan ဆိုက်သို့ access လုပ်ကာ အသုံးပြုရန် ၀င်ရောက်ပြီး၊「အသင်း၀င် စာမျက်နှာ」ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်စင်」 မှ နောက်တစ်ကြိမ် ဆွဲယူပေးပါ။ အခြားသော Android device တွင် Xan viewer、i-Press ၀န်ဆောင်မှု ၏ application ကို install လုပ်ထားခြင်းမရှိသော အခါတွင် application ကိုGoolge Play Store မှတဆင့် install ပြုလုပ်ပေးပါ။
Q. အခြားသော device အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
A. Xan တွင် ၀ယ်ယူထားသော စာအုပ်များသည် အခြားသော device တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းအလိုက် ဆွဲယူနိုင်သော အကြိမ်အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ကန့်သတ်အကြိမ်ကျော်လွန်သွားပါက ဆွဲယူ၍မရနိုင်တော့ပါ။
Q. ငှားရန်းထားသောစာအုပ်များကို ဆွဲယူနိုင်သော အချိန်ကာလ ကျော်လွန်သွားပါက မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
A.ဆွဲယူနိုင်သော အချိန်ကာလ ကျော်လွန်သွားပါက နောက်တစ်ကြိမ် ၀ယ်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
Q. PDF သို့မဟုတ် EPub ဖိုင်သည် ဖွင့်၍မရပါ။
A. Xan ၊ စာအုပ်ဆိုက်မှ ဝယ်ယူထားသော PDF သို့မဟုတ် EPub (ဖိုင်ပုံစံ) မဟုတ်ပါက Xan Viewer မှတဆင့်ဖတ်ရှုရာတွင် အဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
Xan Viewer ကို download ဆွဲယူ၍ install သွင်းမှသာ စာအုပ်များကို အဆင်ပြေစွာဖတ်ရှုနိုင်ပါမည်။ download link ထည့်ရန်
သင့်လျော်သော ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ Xan မှ၀ယ်ယူထားသော စာအုပ်ကို ဖတ်ရှုရာတွင်
၁။ဖတ်ရှုမည့်စာအုပ်အမျိုးအစား သည် Xan ၊ စာအုပ်ဆိုက်မှ ဝယ်ယူထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါက LogIn ဝင်ရပါမည်။
၂။ပထမဆုံးအနေဖြင့် Xan Viewer ကိုစတင်သုံးမည်ဆိုပါက အင်တာနက်ကော်နရှင်မရှိလျှင် ဖတ်ရှု ၍မရနိုင်သောကြောင့် Login ဝင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၃။Online Mode ဖြင့် Login တစ်ကြိမ် ဝင်ပြီးပါက ကော်နရှင်မရှိ သော်ငြားလည်း Offline Mode ဖြင့် ဖတ်ရှု၍ရနိုင်ပါသည်။
Q. Xan မှ အသင်း၀င် မှတ်ပုံတင်သွင်းခြင်း ပြီးဆုံးကြောင်း မေးလ်နှင့် ၀ယ်ယူခြင်း ပြီးဆုံးကြောင်း မေးလ်တို့သည် ရောက်ရှိမလာပါ။
A. Xan မှ မေးလ်ကို「 Spam Mail 」ဖိုင်တွဲအတွင်း၌ ထိန်းသိမ်းထားခံရသည့် အခြေအနေလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ 「 Spam Mail 」ဖိုင်တွဲကို အတည်ပြုပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ အထက်ပါအတိုင်း အတည်ပြုထားသော်လည်း မေးလ်သည် ရောက်ရှိမလာပါက မေးလ်၏ လက်ခံခြင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်း setting ပြုလုပ်ထားမိခြင်းရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုပေးပါ။ ထိုသို့ အတည်ပြုပြီးသည့်နောက်တွင်လည်း မေးလ်သည် ရောက်ရှိမလာပါက၊ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း သို့ အကြောင်းကြားပေးပါ။ [စုံစမ်းမေးမြန်းရန်]
Q. တယ်လီဖုန်းဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသလား။
A. ဖုန်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းမရှိသည့်အတွက် အနူးအညွှတ် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
မရှင်းလင်းသော အချက်များရှိပါက 「စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း」 သို့ အကြောင်းကြားပေးပါ။ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်
Q. ပုံနှိပ်ထားသောစာရွက်နှင့် စာအုပ်များကို ရောင်းချပါသလား။
A. Xan တွင် ရှိသော စာအုပ်များသည်Window device , iOS device（iPhone/iPod touch、iPad）Android deviceတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သော electronic data ပုံစံဒီဂျစ်တယ်လ် စာအုပ်များကို ရောင်းချပါသည်။
ပုံနှိပ်ထားသော စာရွက်နှင့်စာအုပ်များ DVD နှင့် CD ကို လုံး၀ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်း မရှိသည့်အတွက်၊ ၀ယ်ယူသည့်အခါ မှားယွင်းခြင်းမရှိစေရန် သတိပြုစေလိုပါသည်။
Q. စာအုပ်ကို တောင်းဆိုချင်ပါသလား။
A. ဖတ်ရှုချင်သော စာအုပ်များကို မတွေ့ရှိသောအခါတွင်၊ စာအုပ်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ တောင်းဆိုခြင်းသည် 「စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း」 သို့ အကြောင်းကြားပေးပါ။ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်
Q. Xan တွင် စာအုပ်များကို ရောင်းချချင်ပါသလား။
A.Xan တွင် စာအုပ်များ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ပြစသည်ဖြင့် ကဏ္ဍစုံလင်စွာဖြင့် စာအုပ်များကို စုစည်းထားပါသည်။ [E-book စာအုပ်များတင်ရန် လျှောက်လွှာ] ကို ပေးပို့ပေးပါ။ E-book စာအုပ်များတင်ရန် လျှောက်လွှာ
Q. စာအုပ်များ၏ ဖိုင်အမည်ကို ပြောင်းလဲချင်ပါသလား။
A. ဖိုင်အမည်သည် ပြောင်းလဲသော်လည်းပဲ ပြဿနာမရှိစေဘဲ ဖတ်ရှု၍ရနိုင်ပါသည်။ ဖိုင်အမည်၏ extension ကိုမူ ပြောင်းလဲခြင်းမပြုလုပ်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဖိုင်အမည်၏ extension ကို ပြောင်းလဲလိုက်သည့်အခါတွင် Xan viewer သည် အသိအမှတ်မပြုတော့သည့်အတွက် ဖတ်ရှု၍ မရနိုင်တော့ပါ။
Q. နိုင်ငံခြား version ၏ PC တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
A. အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်အဆင်မပြေမှုများရှိပါက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်မည် မဟုတ်သောကြောင့် အထူးနားလည်ပေးစေလိုပါသည်။
Q. Window အသစ်တင်ခြင်း၊ Window Update လုပ်ခြင်း၊ကွန်ပျူတာ၏ Hardware တစ်ခုခုပြောင်းလဲပြုပြင်ခြင်း မလုပ်ဆောင်ခင်တွင် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ရှိပါသလား။
A. iOS၊နှင့် Android အသစ်တင်ခြင်း၊ Update လုပ်ခြင်း၊Hardware တစ်ခုခုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ပြုလုပ်ပါက စာအုပ်များနှင့် application သည် ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါသည်။
နောက်တစ်ကြိမ် စာအုပ်များကို အဆင်ပြေစွာ ဖတ်ရှုရာတွင် iOS device（iPhone/iPod touch、iPad）တွင် iBook(အခမဲ့ သို့မဟုတ် စာမြည်းစာအုပ်များသာ) ၊နှင့် Android device တွင် Xan viewer ကို install ပြန်လုပ်ပေးပါ။
Xan ဆိုက်တွင် access လုပ်၍ အသုံးပြုရန် ၀င်ရောက်ပြီး၊「အသင်း၀င် စာမျက်နှာ」၏「ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်စင်」 မှ နောက်တစ်ကြိမ် ဆွဲယူပေးပါ။
Viewer software နှင့် ပတ်သက်၍